सुई, सिसा तथा प्लाष्टिकजन्य वस्तु जथाभावी फालिएपछि… – MEDIA DARPAN
सुई, सिसा तथा प्लाष्टिकजन्य वस्तु जथाभावी फालिएपछि…
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित ६ असार २०७७, शनिबार २०:४९
दाङको तुलसीपुर बजार वरपर रहेका कुला तथा नालामा फोहर फाल्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा किसान परेका छन् ।
कुलो तथा नालामा पसलबाट निस्किएको फोहर, सुई, सिसा तथा प्लाष्टिकजन्य वस्तु जथाभावी फाल्नाले वर्षात्मा बाढी आएको बेला किसानको खेतबारीमा सोझै जाने गरेको किसान बताउँछन् ।
केही दिन अगाडि पानी परेपछि कुुुलाले बगाएर ल्याएको फोहरले कुलो थुनिँदा तुलसीपुर–१२ का माधव केसीको व्यावसायिक बट्टाई फार्ममा पानी पसेपछि रु दुई लाख बराबरको क्षति भयो । त्यस्तै स्थानीयवासी कमला वली फोहर संकलन गर्ने क्रममा हातमा सुई बिझेर केही दिन थला पर्नुप¥यो । तुलसीपुर बजारको पुछारमा खेती गर्ने किसान र बासिन्दा यसरी नै पीडा खेपिरहेका छन् ।
‘‘वर्षात्को पानीले सबै फोहर बगाएर हाम्रा खेतबारीमा थुप्रिन्छ, वर्षौँदेखि यसरी नै फोहर बगाएर ल्याउने समस्या छ’’, स्थानीयवासी सुदीप आचार्यले भने । उनले खेतमा प्लाष्टिक, कपडा र सीसा बगेर आउने गरेकाले उत्पादनमा असर परेको गुनासो गर्नुभयो ।
दिनहुँजसो खेतमा प्लाष्टिक र कुलोले बगाएर ल्याएको फोहर टिप्न बाध्य भएको किसान बताउँछन् । खेतैभरि फोहरको डुंगुर जम्मा भएपछि उब्जनीसमेत कम हुने गरेको छ ।
तुलसीपुर बजारमा भने साप्ताहिक रुपमा ‘ग्रीन तुलसीपुर क्लिन तुलसीपुर’ अभियान सञ्चालन छ । बजारको मुख्य सडकमा सरसफाइ हुने गरे पनि अन्य स्थानमा भने फोहर जथाभावी फाल्ने गरेका कारण समस्या हुने गरेको उपमहानगरपालिको जनाएको छ ।
यसको प्रत्यक्ष मारमा वडा नं १० र १२ का बासिन्दा परेका छन् । फोहरले गर्दा खेतीयोग्य जमीनमा असर गर्नाका साथै नोक्सानी पु¥याएको भन्दै किसान वर्षेनी सम्बन्धित निकायमा धाउने गरेका छन् । त्यसको सुनुवाइ भने हुन नसकेको स्थानीयवासी धनीराम चौधरीेले गुनासो गरे ।
उपमहानगरपालिकाभित्र उत्पादन हुने जैविक र अजैविक फोहर नछुट्याउँदा पनि यस्तो समस्या आएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सूर्यप्रकाश डाँगीले फोहर व्यवस्थापन र समस्या समाधानका लागि अध्ययन शुरु गरिएको जानकारी दिए । यसका लागि ढल निकासको पहल थालिने उनको भनाइ छ । ‘‘यस विषयमा हामीहरु गम्भीर भएका छौँ, अब यसको व्यवस्थापनका लागि नीति बनाएर कार्यान्वयन पनि गर्ने तयारीमा छाैं’’, डाँगीले भने ।
बालबालिकामा कोरोनाको डर कम गर्न के गर्ने ?
साउदी अरबले राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू हटाउँदै
कर्णालीमा अध्यादेशबाटै लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन, कहिले हुन्छ विज्ञापन आह्वान ?
अदालतको विषयमा धेरै बोल्न मिल्दैन : देउवा
केपी ओली र प्रभु साहबीच भेटवार्ता
सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’को बैठक सकियो
राजीनामा घोषणा गरेकी मुख्यमन्त्री शाक्य भन्छिन्– संविधान विपरीत सत्तामा बसिनँ
मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाइन् राजीनामा
इच्छाराज तामाङलाई थप १८ दिन हिरासतमै राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति
सुदूरपश्चिममा प्रधानमन्त्री : बाढी-पहिरो पीडितलाई के के दिए आश्वासन ?
कर्णाली प्रदेशमा लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन गर्न पनि अध्यादेशको बाटो रोजिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्…
एमाले फुटेपछि ओली र माधवले सम्बोधन गर्दै
कर्णालीमा अध्यादेशबाटै लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन, कहिले हुन्छ…
प्रधानन्यायाधीशले आफूमात्रै रहने पेसीसमेत तोके, बस्ला त…